कुनै समय एनजीओ चलाएका र अपराधी पृष्ठभूमिकाहरुले तराईबाट एमाले लखेट्न सक्दैनन् — सत्यनारायण मण्डल ,स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा (एमाले) – Maitri News
कुनै समय एनजीओ चलाएका र अपराधी पृष्ठभूमिकाहरुले तराईबाट एमाले लखेट्न सक्दैनन् — सत्यनारायण मण्डल ,स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा (एमाले)
नेकपा (एमाले)ले फागुन २१ वाट सुरु गरेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानका क्रममा सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा मधेसी मोर्चाका केही कार्यकर्ताले ढुंगा–मुढा र भीडप्रति लक्षित गर्दै पेट्रोल बम प्रहार गरेपछि नेकपा (एमाले)को मेची–महाकाली अभियान तीन दिनका लागि स्थगन भयो । अहिले फेरि सुचार अभियान कञ्चनपुरसम्म पुग्ने तयारीमा छ । तर, सप्तरी घटनापछि भने मुलुकको राजनीतिमै केही असहज परिस्थिति देखिएको छ । अहिले मधेसमा एमालेका कार्यालय तोडफोड गर्ने, झण्डा जलाउने जस्ता हर्कत पनि भएका छन् । त्यस्ता घटनालाई एमालेका मधेसी नेताहरुले दुर्भाग्पूर्ण भनेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय र एमालेको झण्डा जलाउनेहरु नेपाली नभइ भारतीय दलाल भएको आरोप लगाएका छन् । पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका लालबाबु पण्डितले त खुलेआम उनीहरु भारती दलाल भएको संज्ञा दिनुभयो । ‘राष्ट्रिय झण्डामा आगो लगाउने आफ्नै देशका पार्टीहरुको कार्यालय र झण्डामा आगो लगानेहरु नेपाली हुन सक्दैनन,’ पण्डितले भन्नुभयो ‘उनीहरु भारतीय दलाल हुन् ।’
पण्डितले सप्तरी घटनाको प्रमुख दोषी वर्तमान गृहमन्त्री भएको उहाँको दाबी छ । वर्तमान गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले लाहनमा गएर उत्तेजित भाषण गरेको केही दिनपछि सप्तरीमा एमालेको कार्यक्रम भएको र गृहमन्त्रीको उत्तेजित भाषण नै सप्तरी घटनाको प्रमुख कारण बनेको उहाँको तर्क छ । उहाँले मधेसी मोर्चा आतंककारी बाटोमा हिडेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ । रााजनीतिक बाटोमा नआए उनीहरुलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने दाबी समेत उहाँले गर्नुभएको छ त्यसो त एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश नम्बर दुईका एञ्चार्ज सत्यनारायण मण्डलले पनि त्यस्तै आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले पनि विदेशीको पैसा र सहयोगमा सप्तरी घटना भएको दाबी गर्नुभयो । सप्तरी घटना नियोजित रुपमा घटाइएको उहाँको तर्क छ । सात ठाउँमा मेस चलाएर, झोलामा बम भित्र्याएर सप्तरी घटना घटाइएको दाबी गर्ने मण्डल प्रहरीले संयमता नअपनाएको भए त्यहाँ कैलालीको भन्दा दुर्भाग्यपूण घटना घट्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ पनि वर्तमान गृहमन्त्रीकै कारण सप्तरी घटना घटेको आरोप लगाउनु हुन्छ । उहाँसँग सप्तरी घटना, त्यसपछिको एमालेको अवस्था, तराईमा एमालेको मूल्याङकनलगायतका बारेमा मैत्री न्युज डटकमले गरेको कुराकानीः
सप्तरीमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
सप्तरीमा घटना घटेको होइन्, सुनियोजित रुपमा घटना घटाइएको हो । तराई–मधेसमा एमालेको जनलहर देखेर अत्तालिएका अपराधीहरुले सुनियोजित रुपमा त्यहाँ घटना घटाएका हुन् । अरुको पैसामा भात खाएर सात ठाउँमा मेस चलाएर, झोलामा बम भित्र्याएर सप्तरी घटना घटाइएको हो ।
ए भनेपछि त्यहाँको घटना स्थानीयको भन्दा पनि अरुको बलमा घटेको हो, होइन त ?
त्यहाँका रैथाने सबै एमाले छन् । त्यहाँ त अपराधीहरुले त्यस्तो घटना घटाएका हुन् । स्थानीयले नै त्यो आँट गर्न सक्दैनन् । एमालेले सप्तरीमा कार्यक्रम गर्नु भन्दा एक हप्ता अघिदेखि राजविराजका होटलहरु भरिएका थिए । सात ठाउँमा मेस चलेका थिए । झोलामा बम भित्र्याएका थिए । के त्यो स्थानीयले हो ?
अहिले एमाले नेताहरुले सप्तरी घटनामा एमालेका शीर्ष नेताहरुको सामूहिक हत्या गर्ने प्रयास भएको थियो । विफल भयो पनि भन्दै आएका छन् नि ?
त्यो त स्पष्ट देखिएकै कुरा हो नि ? प्रहरीले आफ्नो बहादुरीपना नदेखाएको भए त्यहाँ कैलाली घटना हुने थियो । त्यहाँ गौरको घटना दोहोरिने थियो । एमालेका शीर्ष नेताहरु बसेका मञ्चमा पेट्रोल बम मिल्काइन्छ । सुतली बम मिल्काइन्छ । घरेलु हतियार बोकेर प्रहरीलाई नै आक्रमण गर्दै मञ्चमा प्रवेश गर्ने प्रयास हुन्छ । यी सबै घटनाले पनि प्रष्ट हुँदैन र, सप्तरीमा एमाले नेताहरुको सामूहिक हत्या गर्ने प्रयास भएको थियो भनेर ? सप्तरी घटनामा पाँच जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु पर्यो, हामी दुःखी छौँ । तर, प्रहरीले त्यहाँ गोली नचलाएको भए निकै ठूलो नरसंहार हुने थियो । त्यो टर्यो ।
अहिले पनि त्यहाँ त मोर्चाका नेता–कार्यकर्ताहरुले एमाले नेताहरुका घरमा तोडफोड गर्ने, कार्यालय र झण्डा जलाउने जस्ता हर्कत जारी राखेको छन् । त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्रिय र एमालेको झण्डा जलाउनेहरु नेपाली नभइ भारतीय दलाल हुन् । उनीहरुको पृष्ठभूमि नै दलाली छ । उपेन्द्र यादव पहिला एमाले त्यसपछि माओवादी हुँदै गौर नरसंहार घटना घटाएर राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन् । कुनै समय एनजीओ चलाएर बसेका उपेन्द्र यादवको पृष्ठभूमि सकारात्मक छैन । पूर्वमन्त्री समेत भैसकेका केही व्यक्तिहरु अहिले पनि अपहरण गर्ने लगायतका अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन् । मोर्चामा संलग्न केही नेताहरु अहिले पनि प्रहरीको निगरानीमा छन् । यस्ता अपराध कर्ममा रहेका व्यक्तिहरुका कारण मधेस अशान्त बनेको हो ।
एमाले मधेसमा कमजोर छ भन्ने चर्चा थियो । अहिले त झन् प्रदेश नम्बर दुईमा एमाले कार्यक्रम नै गर्न नसकेर फर्केपछि त्यसको थप पुष्टि भयो नि होइन ?
विल्कुल त्यस्तो होइन । एमाले कति शक्तिशाली छ भन्ने एमालेको जनलहरले नै धेरैलाई थाहा भयो होला । हामी अहिले पनि प्रदेश नम्बर दुईमा भव्य कार्यक्रम गर्ने हैसियत राख्छौँ । खाली यति हो, हामी मुठभेडमा सकेसम्म नजाऔँ भन्नेमा छौँ । हामी केही समय भित्रै फेरि प्रदेश नम्बर दुईमा भव्य कार्यक्रम गर्छौ । त्यहाँ हामी पचासौँ हजार मान्छे उतार्छौ । अहिले पनि तराईमा एमालेको लहर देखेर धेरैको सातो गएको छ । हामी उनीहरुलाई भन्न चाहन्छौँ । तराईमा एमाले कमजोर छैन । मुठभेड मात्र नचाहेको हो । अहिलेको मेची–महाकाली रारष्ट्रिय अभियानले पनि त्यही पुष्टि गरेको छ ।
ए भनेपछि तराईमा मोर्चा होइन एमाले नै बलियो छ होएन त ?
हो, हाम्रो विरोधमा मधेसमा झुठा प्रचार र भ्रमको खेती भएको छ । त्यसलाई हामीले समयमै चिन्न सकेनौं । आज उनीहरु आफुलाई लोकतान्त्रिक भन्छन् । हामीलाइ यिनीहरु मधेशमा लुकीछिपी हिड्छन् भन्छन् । जतिबेला यि दलहरु जन्मिएका थिएनन्, म त्यतिबेला खुल्लम खुला राजनीति गरेर जेल जीवन बिताएको मान्छे हुँ । म निरंकुश राजत्रन्त्रको विरुद्धमा पनि हतियार बोकेर हिँडेको हुँ । त्यतीमात्र होइन १२ वर्ष भूमिगत रहेर पञ्चायतलाई खारेज गराएको हुँ । त्यसपछि मात्र खुला भएको हो । अहिले यिनीहरु व्याण्डबाजा बजाएर तराईबाट एमालेलाई लखेट्ने भन्छन् । मलाई अचम्म लाग्छ । म उनीहरुलाई भन्न चाहन्छु, विदेशी व्याडबाजा होइन पुर्वीय सम्भता र दर्शनहरुमा सहनाई बाजा छ । हाम्रा पुर्खाहरुले निर्माण गरेको सहनाइ बाजा, शास्त्रीय संगीत गाँउदै त्यस्ता लम्पटहरुलाई जहाँबाट आएका थिए त्यही पुग्नेगरी मधेसबाट लखेट्छौं । मधेसकै धर्तीमा कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भएको हो । त्यत्रा किसान आन्दोलन भयो । यिनिहरु कसको बुई चढेर यस्तो भनिरहेछन् ?
भनेपछि तपाईँहरु अझै तराईमा संगठन निर्माण अभियानमा जुट्नु हुन्छ होइन ?
कुनै समय प्रचण्डको नेतृत्वमा सबै मधेसी मोर्चाका नेतासहित ३१ दलको गठबन्धन थियो । उनीहरुले मलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइदिए । मेरो पार्टी कार्यलय आगो लगाएर ध्वस्त गरिदिए । तर, पनि हामी उनीहरुको त्यो सामाजिक फासीवाद चरित्रसँग डराएर भागेनौँ । म भन्न चाहन्छु । मधेसी मोर्चाले यदि आगो बाल्छ भने मधेसकै जनताले हिसाब माग्छन् । अहिलेसम्म कतिजना मान्छे मारेको छ ? किन संविधान निर्माण नगरिकन दशगजामा गएर धाक लगाएर नेपालको साास नै थुन्ने काम ग¥यो ? ९० प्रतिशत भन्दा बढ्ता प्रतिनिधीले घोषणा गरेको संविधान जुन हालते जलाए, त्यही हातले दशौं दिनमा गएर किन शुसील कोइरालालाई भोट हाले ? जतिबेला ५२ जना मधेसका गरिवका छोरालाई यिनीहरुले मारिसकेका थिए । यो हिसाब जनताले किन नखोज्ने ? यि फटाहाहरुले जाउ आन्दोलनमा मर, भोली हाम्रो सरकार आँउछ, हामी तिम्रो परिवारलाई ५० लाख रुपिंया दिन्छु भनेका थिए । यस्तो वाहियात घोषणा गर्नेहरु अहिले फेरि आगो बाल्छु भन्ने ? अब मधेसी जनता उनीहरु जत्तिकै मुर्ख छैन । उनीहरुले हाम्रो साथ दिन्छन् । संविधान कार्यान्वयनमा साथ दिन्छन् ।